Kutsvagurudza Kwekutanga Kunoshandura Sei Mabhiza kuva maindasitiri Vatungamiriri | Martech Zone
Vashambadziri vatendeukira kune zvemukati kushambadzira, zvemagariro midhiya, chizvarwa kushambadzira uye gumi nemaviri emamwe marongero ekushambadzira ekuvaka hukama nevanovavarira vateereri. Nyanzvi dzekutengesa dzinogara dzichitsvaga matekinoroji matsva uye marongero ekuvaka masimba avo uye kuzivikanwa. Imwe nzira yakasarudzika iyo makambani akati wandei ari kuratidza mamiriro avo se vatungamiriri veindasitiri iri nekugadzira yakasarudzika kutsvagisa kwekutanga izvo zviri zviviri zvinovimbika uye zvinobatsira kuvaverengi vazvo.
Yekutanga Musika Tsvagiridzo Tsanangudzo: Ruzivo runouya zvakananga kubva kunobva – ndiko kuti, vanogona kuve vatengi. Iwe unogona kuumbiridza ruzivo urwu iwe pachako kana kuhaya mumwe munhu kuti azviunganidzire kwauri kuburikidza neongororo, mapoka ekutarisa uye dzimwe nzira. Tsanangudzo na Entrepreneur
Janna Finch, Managing Mupepeti pa Software Zano, kambani yekutsvagisa iyo inopa mahara ongororo yeanoshambadzira software, munguva pfupi yapfuura yakagadzira mushumo iyo inopa mienzaniso mina yemakambani akashandisa kutsvagisa kwekutanga senzira inoshanda yekumaka. Takasarudza kubata naFinch uye tione rumwe ruzivo rwaaifanira kugovera nezve kushandisa zano iri. Izvi ndizvo zvaaifanira kupa:
Kutsvagisa kwekutanga kungabatsira sei kuvaka chiremera chechiratidzo?
Vatengesi vanoziva kuti kutsikisa ruzivo rwakagovaniswa kasingaperi hakuna kukwana kuwedzera mashandiro ekutsvaga kana kukudziridza kuverengera kwakagadzira kutungamira uye shanduko. Iyi haisi nzira yekubudirira, uye haizoiti kusiyanisa brand yako kubva kune mamwe mabhii.
Yakakwira-mhando, zvemukati zvemukati inzira yakanaka yekukwira pamusoro peruzha rwevanokwikwidza uye kwekutanga kutsvagisa zvinokwana bhiri. Kutsvagisa kwekutanga, kana kwaitwa nemazvo, kunopa zvaunotarisira zvemukati izvo zvakasarudzika uye zvisingawanikwe chero kumwe kunhu nekuti itsva.
Kuburitsa kutsvagisa kwekutanga kune zvakakosha:
Zviri mukati inogovaniswa: Vanhu vanogara vachitsvaga zvinhu zvitsva uye zvinonakidza uye vanodzivirira zvemukati zvakagoverwa mazana enguva nemipendero yakati siyanei. Kutsvagurudza kwepakutanga kune mukana uri nani wekunakidzwa uye kubatsira, zvinoreva kuti vanhu vanowanzoita tweet iyo, senge iyo, pini kana blog nezvayo.
It inosimbisa chiremera chako pane iyi nyaya: Kuita chirongwa chekutanga chekutsvaga harisi basa riri nyore. Zvinoda maawa mazhinji emurume uye kuzvipira. Vanhu vanoziva izvi uye vanoziva kuti kana kambani yako yaive yakakomba zvakakwana kuti iite chirongwa chikuru chekutsvaga, iwe ungangove une simba pachinhu ichi.
Chiremera chekuvaka chine zvakare SEO zvinoreva. Kuwanda kwevanhu vanovimba neako marashi uye vanoremekedza zvemukati, zvakanyanya zvinhu zvako zviri kuzogoverwa uye kubatanidzwa nazvo. Injini dzekutsvaga dzinoona kuti kana iwe uchigutsikana uri kugoverwa zvakanyanya, saka zvinogona kunge zviwanikwa zvakakosha. Kana Google ikaona kuwirirana mune zvemukati mako, chiratidzo chako chinotakura masimba mazhinji uye wotanga kuoneka wakakwirira mumaSERP uye vanhu vazhinji vachashanyira saiti yako. Vamwe vashanyi vanowanzoreva kutendeuka kwakawanda.
Nei ichi chivakwa chine chiremera paInternet chakakosha kumabhizinesi?
Vanhu vanowanzo tsvaga makambani nekuti vanovimba necheni yavo, kana ivo vanopa ruzivo rwavaitsvaga, kana ivo vakave nezvakanaka zvakaitika zvekare. Nekuvaka iro zita rechiratidzo, urikuvakawo kuvimba. Kana vanhu vakavimba nekambani yako uye vachikuona iwe semutungamiri, zvinogona kupedzisira zvaendesa kune dzimwe nongedzo nemari.
Izvi zvinonyanya kukosha paInternet. Kunyanya kuve nemvumo yechiratidzo chako, zvakanyanya mukana wekukwirisa zvakanyanya mumhedzisiro yekutsvaga. Iyo yakakwira bhizinesi rako rinosvika pane peji reGoogle mitsva yekutsvaga, iyo inowoneka chiratidzo chako, uye kuratidzika kukuru kunoreva mari zhinji. Zvichitaurwa zviri nyore, hapana munhu anombotenga kubva kune webhusaiti yavasingawani
Iko kune here muenzaniso weiyo brand iyo yakabudirira kuita iyi yekushambadzira zano?
Kune makambani akati wandei akabudirira kushandisa kwekutanga kutsvagisa kuvaka yavo yemhando chiremera. Imwe kambani kunyanya yakave nekubudirira kunoshamisa kushandisa zano iri - Moz. Moz anga ari chiremera pane yekutsvaga injini optimization (SEO) kweanoda kusvika makore gumi. Nekudaro, mukuyedza kuchengetedza chinzvimbo chavo semukuru-mukuru kuenda-kune-sosi yezvivakwa zveSEO, ivowo vanotarisa kutsvagurudzo yekutanga.
Moz yakaongorora pamusoro pevashambadzi vepamusoro ve120 veSEO kuti vatore maonero avo pane zvinopfuura makumi masere enjini dzekutsvagisa zvinhu. Moz yakaunganidza data uye yakagadzira nyore-kuverenga magirafu uye data data yekuverengeka kwakanyanya uye kugoverana. Sarudzo yavo yekutendeukira kwekutanga kutsvaga kwakabudirira zvakanyanya nekuti vakapa vatengesi veSEO tsvakiridzo inobatsira uye yakavimbika isina mumwe munhu aigona kupa. Kuedza uku kwakavawanisa chinongedzo chinosvika mazana manomwe uye zvinopfuura zviuru zviviri zvemagariro (uye kuverenga!). Rudzi urwu rwekuonekwa harungowedzere chete simba rechiratidzo, asi zvakare rinosimbisa mukurumbira wavo seyakakurumbira sosi yeSEO ruzivo uye maitiro akanakisa.
Ndeapi mazano aunayo kune mamwe makambani ari kufunga nezvekushandisa kwekutanga kutsvagisa kuvaka chiremera chavo?
Nzwisisa kuti kugadzira yepamusoro-soro ongororo yekutanga inotora yakawanda nguva uye nesimba. Sezvo nechero chikuru chirongwa, zano uye kuronga kwakakosha. Heano mibvunzo mishoma yaunofanirwa kuzvibvunza usati watanga kuunganidza data:
Chii chandinoda kuziva?
Ndingaunganidze sei iyi mhando yeruzivo? Zvibvunze pachako kana nzira yakanakisa yekuunganidza data ndeyekugadzira ongororo yakagovaniswa, kana kubvunzurudza boka diki revanyanzvi, kana kana iwe uchigona kuunganidza iyo data nekuita kwako kuona
Zvakawanikwa muchirongwa ichi zvinobatsira sei vatengi vangu kana vateereri? Iwe unogona kuenda kuburikidza nekufamba kwese uye kushanda nesimba kwekuunganidza mhando yemhando, asi kana isingabatsire, inonakidza uye yakagovaniswa zviri nyore, zvinobatsira sei kuvaka chiremera chako?
Kana iwe ukatarisa iyi mibvunzo iwe watove pamberi pevazhinji vevanokwikwidza.
Wati wamboshandisa tsvagiridzo yekutanga kukwidziridza chiremera che brand yako? Ndokumbirawo ugovane yako nyaya kana makomendi pazasi.
Tags: Janna FinchmukomanaYekutanga Musika Ongororokutsvagisa kwekutangatsvakurudzosoftware kuraira
WordPress: 3 Zvikonzero zvekuisa Jetpack Now!